​चीनमा भएको विस्फोटको अध्ययनका लागि दुई सय सैनिक खटाइयो
(एजेन्सी) । चीनको उत्तरी थियान्चिन शहरमा रासायनिक सामान राखेको एक गोदाममा विस्फोट हुँदा ५० जना मारिएपछिको घटना अध्ययन गर्न दुई सय जना सैनिक विशेषज्ञ टोली पठाइएको छ । स्थल सैन्य टोलीले..
​राखेपका सदस्य सचिव विष्टले गरे आफ्नौ तलब कटौती
काठमाडौं । राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले बोर्ड सदस्यहरुको तलब कटौती गरेको छ । सदस्य सचिव केशवकुमार विष्टले गरेको प्रस्ताव अनुसार खेलकुद परिषद्को हालै बसेको बोर्ड बैठकले बोर्डका सदस्यहरुले पाउँदै आएको मासिक..
​दूध बेचेरै मासिक तीस हजार कमाउँछन् : हेमसागर
ताप्लेजुङ । ताप्लेजुङ नगरपालिकाका एक किसानले दूध बेचेरै मासिक ३० हजारसम्म आम्दानी लिने गरेका छन्। ताप्लेजुङ नगरपालिका– १ केनिमका किसान हेमसागर भट्टराईले आफ्नै घरमा उत्पादित तथा गाउँबाट सङ्कलन गरेको दूध सदरमुकाम..
​मुलुकभित्रै स्वरोजगार गराउन अनुदान
भद्रपुर । जिल्ला कृषि विकास कार्यालय झापाले गएको आवमा किसानलाई तीन करोड ७४ लाख ९९ हजार रुपैयाँ विभिन्न शीर्षकमा अनुदान वितरण गरेको छ । युवा जनशक्तिलाई कृषिमा आकर्षण गरेर मुलुकभित्रै स्वरोजगार..
​जङ्गलमा पाइने जङ्गली निगुरो बेचेर खाद्यान्नको जोहो
मोरङ । हरेक दिन बिहान झोलामा खाजा बोकेर ५३ वर्षीय नरबहादुर कार्की र कमला कार्की निगुरो खोज्न जङ्गलतर्फ हानिन्छन् । महेन्द्र राजमार्गको मोरङ खण्डमा पर्ने कानेपोखरीदेखि बेतना सीमसार आसपासको जङ्गलमा..
​सरकारले तोकेको मूल्यमा उखु किन्न सक्दैनौं : चिनी उद्योगी
काठमाडौँ । सरकारले एकतर्फी रुपमा उखुको मूल्य निर्धारण गर्दा चिनी उद्योग गम्भीर आर्थिक सङ्कटमा परेको भन्दै निर्णय सच्याउन उद्योगीले आग्रह गरेका छन् । नेपाल चिनी उद्योग सङ्घले बुधबार पत्रकार सम्मेलन गरी..
​पन्ध्र करोडभन्दा बढीको सुन्तला बिक्री
तनहुँ । आर्थिक वर्ष २०७१/७२ मा तनहुँमा १५ करोड नौ लाख रुपैयाँ बराबरको सुन्तला बिक्री भएको छ । कृषि विकास कार्यालयले दिएको जानकारीअनुसार जिल्लामा पाँच हजार ७०० मेट्रिक टन सुन्तला उत्पादन..
​धुन्चेका किसान तरकारीखेतीमा
रसुवा । रसुवाको धुन्चे गाविसका किसान तरकारीखेतीतर्फ आकर्षित भएका छन् । एक याममा मात्र न्यूनरुपमा फल्ने अन्नबाली भित्र्याएपछि खाली रहने जमिनको सदुपयोग गर्दै लघुउद्यम विकास कार्यक्रमको सल्लाहसुझाव, प्राविधिक ज्ञान र..
दुधबाट एउटै जिल्लाको कमाई तीन अर्ब
कावासोती । नवलपरासीमा वार्षिक ६३ हजार मेट्रिक टन दूध उत्पादनबाट जिल्लाले रु तीन अर्ब कमाउँछ । यसबाट वार्षिक चार हजार ३१५ जनालाई रोजगारी सिर्जना भएको छ । पशु फार्मले घाँस उत्पादनदेखि,..
साउन महिनाभरी शाकाहारी अभियान, के खान हुन्छ, के हुदैन ?
काठमाडौं । नेपाल शाकाहारी संघले साउन महिनाभरी शाकाहारी भोजन गरेर ुशाकाहारी साउन अभियानु सफल बनाउन सबै नेपालीमा अनुरोध गरेको छ। संघका कार्यकारी अध्यक्ष कृष्ण गुरुङले जारी गरेको विज्ञप्तिमा करुणा, दया र..
​पहिरोले विजयपुर भगवती हाइड्रोपावरमा क्षति, विद्युत उत्पादन बन्द
पोखरा । पोखराको विजयपुर खोलामा निर्मित विजयपुर–१ साना जलविद्युत परियोजनाको पावर हाउसमा पहिरोले क्षति पुर्‍याएको छ। अविर वर्षा पछि पोखरामा बन्न लागेको विमानस्थल तिरबाट आएको भलले विजयपुर खोला थुनिएपछि पावर..
​सरकारको कृषि कार्यक्रमबारे कृषक नै अनविज्ञ
काठमाडौँ । सरकारले उपलब्ध गराउने कृषि कार्यक्रमबारे आफूहरुलाई पर्याप्त जानकारी नभएको कृषकले गुनासो गरेका छन् । नेपाल कृषि पत्रकार प्रतिष्ठान (जोना) र खाद्यका लागि कृषि अभियानले संयुक्त रुपमा आइतबार यहाँ..
​बाख्रापालन गर्न साढे एघार लाख अनुदान
म्याग्दी । जिल्ला पशुसेवा कार्यालय म्याग्दीले यस वर्ष कृषकलाई व्यावसायिक बाख्रापालनतर्फ आकर्षित गर्न रु एघार लाख ५० हजार अनुदान प्रदान गरेको छ । दरवाङ गाविस ७, ८ र ९ का एकसय..
काठमाडौं । आज असार १५ अर्थाता धान दिवस । राजधानीलगायत देशका विभिन्न स्थानमा धान दिवस धान रोपाइँ गरी मनाइँदैछ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घले सन् १९६६ लाई भोकमरीबाट मुक्त भन्ने नारासहित धानबालीलाई वर्ष..
​​केरा व्यवसायी हमाललाई राष्ट्रपति सर्वोत्कृष्ट किसान पुरस्कार
​काठमाडौं । कैलालीका किसान कालु हमाललाई नगद रू। दुई लाख राशिको सर्वोत्कृष्ट राष्ट्रपति कृषक पुरस्कार वितरण गरिने भएको छ । सर्वोत्कृष्ट किसान पुरस्कार प्राप्त गर्ने पहिलो भाग्यशाली किसान हमाल केरा व्यवसायी..
चुरे संरक्षण गर्न सके बार्षिक अर्बौंको खाद्यान्न आयात रोकिने : राष्ट्रपति
जनकपुर । राष्ट्रपति डा रामवरण यादवले विनाश भइरहेको चुरे संरक्षणका लागि अध्यादेश ल्याउनुपर्ने विचार व्यक्त गरेका छन् । धनुषा जिल्लाको दिगम्बरपुरस्थित जलाद खोलामा आयोजित चुरे संरक्षणसम्बन्धी कार्यक्रममा बोल्दै राष्ट्रपति यादवले..
८२ हजार मेट्रिक टन मल भित्रिदै, यस बर्ष मलको अभाव नहुने
काठमाडौं । खाद्यान्न उत्पादन बढाउन उन्नत जातको विउविजनको माग बढिरहेको सन्र्दभमा द्रुतगतिमा धानको जात विकास गर्ने जैविक प्रविधिसम्वन्धी परियोजना सञ्चालनमा आएको छ। मंगलबार राजधानीमा एक कार्यक्रमबीच कृषि विकास मन्त्रालयका सहसचिव डा।..
​पाँच करोडको लागतमा शीत भण्डारण गृह निर्माण सुरु
भीमदत्तनगर । डडेल्धुरामा शीत भण्डारण गृह निर्माण सुरु गरिएको छ । कृषकको मागअनुसार जिल्लामा आधुनिक शीत भण्डारण गृहको निर्माण सुरु गरिएको हो । नेपालमै पहिलो पटक आधुनिक प्रविधिबाट निर्माण हुने..
​ ​दुग्ध वित्तीय सहयोग परियोजनाका लागि सक्षम र एनएमबी बैंकबीच साझेदारी
​काठमाडौं । होटेल अन्नपूर्णमा आयोजित एक कार्यक्रममाझ सक्षम एक्सेस टु फाइनान्स कार्यक्रमले आफ्नो मध्य र सुदूर पश्चिमका दूध सहकारी तथा कृषकहरूका लागि सक्षमको दुग्ध वित्तीय सहयोग नामक परियोजना कार्यान्वयन गर्नको..
​कर सुधारको विषयमा छलफल सुरु
काठमाडौ । आन्तरिक राजस्व विभागले उच्चस्तरीय कर प्रणाली पुनरावलोकन आयोग र विद्यमान कर प्रणाली सुधारको विषयमा छलफल सुरु गरेको छ । आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक चुडामणि शर्माले मुलुक एकात्मक राज्यबाट..
आत्मनिर्भर बन्दै गएको पोल्ट्री क्षेत्रमा दैनिक चार करोड नोक्सानी
चितवन । आत्मनिर्भर बन्दै गएको नेपालको पोल्ट्री व्यवसाय भूकम्पले प्रभावित बनेको छ । गएको वैशाख १२ गते आएको भूकम्प र त्यसपछिका पराकम्पनका कारण देशको राजधानी काठमाडौँ र छिमेकी जिल्लाहरु पूर्णरुपमा प्रभावित..
​भूकम्प प्रभावित १४ जिल्लाका किसानलार्इ निःशुल्क धानको बिउ
काठमाडौं । सरकारले भूकम्पबाट अतिप्रभावित १४ जिल्लाका किसानलाई निःशुल्करूपमा धानको बिऊ उपलब्ध गराउने भएको छ । भूकम्पका कारण किसानले भण्डारण गरेको बिऊ क्षती भएको भन्दै कृषि मन्त्रालयले प्रभावित क्षेत्रका किसानलाई..
विश्व शान्ति र समृद्धिका लागि बाङ्डुङ भावना आज पनि उत्तिकै महत्व र सान्दर्भिक छ : परराष्ट्रविद्
काठमाडौं । एसियाली तथा अफ्रिकी देशका बीचमा परराष्ट्र सम्बन्ध विकास गर्न बाङ्डुङ घोषणापत्रले सेतुका रुपमा काम गरेको हुँदा यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन आवश्यक रहेको परराष्ट्रविद्ले बताउनुभएको छ । उहाँहरुले बाङ्डुङ..
दाङ । कुनै समयमा घरवास र जग्गा राप्ती नदीले बगाएपछि चिन्तित भएका देउखुरीका किसान अहिले बगर तरकारी खेतीबाट लाखाँको आम्दानी गर्न सफल भएका छन् । यहाँका सात गाविसका किसान बगरमा..
नेपालको जलविद्युत् विकासमा सघाउने नर्वेको चाहना
काठमाडौं । नर्वेले नेपालको आर्थिक विकासको मेरुदण्डका रुपमा रहेको जलविद्युत् क्षेत्रको विकासमा लगानी वृद्धि गर्ने चाहना व्यक्त गरेको छ । नेपालको दुईदिने औपचारिक भ्रमणमा रहनुभएका नर्वेका विदेश राज्यमन्त्री मोर्टेन हगलन्डले..
सानिमाले क्रमश विद्युत उत्पादनको क्षमता विस्तार गर्दै
बुद्धवीर राई इलाम । सानिमा माई जलविद्युत आयोजनाले क्षमता विस्तार गर्दै लगेको छ । गत मङ्सिर २८ गते पहिलोपटक परिक्षण सुरु गरेको आयोजनाले अहिले ८ मेगावाट विद्युत उत्पादन थालेको हो । २२..
​देशभर सिँचाइ कार्यालय स्थापना गर्ने सरकारको तयारी, सिँचाइका लागि सौर्य प्रणाली जडान हुने
काठमाडौँ । सरकारले मुलुकभर नै सिँचाइ सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्यका साथ जिल्ला कार्यालय स्थापना गर्ने भएको छ । हाल आठ वटा डिभिजन कार्यालयले दिँदै आएको सेवा प्रभावकारी हुन नसकेको निष्कर्षसहित..
​गाईफार्ममा आगलागी, २७ लाख क्षति
ललितपुर । कार्यविनायक नगरपालिका–२ फुलबारी मार्गस्थित गाई फार्ममा शुक्रबार आगलागी हुँदा २७ लाख रूपैयाँ बराबरको क्षति भएको छ । आगोले तीनवटा गाई जलेर मरेका छन् । १२ वटा गाई र भैँसी..
​तरकारीमा १५ प्रतिशतले घट्यो विषादी प्रयोग
चितवन । चितवनमा तरकारीबालीमा विषादीको प्रयोग घटेको छ । जिल्ला कृषि विकास कार्यालयका अनुसार १५ देखि २० प्रतिशतले तरकारीमा विषादीको प्रयोग घटेको हो । विषादीसम्बन्धी जाँच गर्दै आएका कार्यालयका बाली संरक्षण..
अदुवा उत्पादनको केन्द्र बन्दै सुर्खेत
वीरेन्द्रनगर । सुर्खेतको भेरीगङ्गा नगरपालिका–८ स्थित कालीदमार गाउँलाई अदुवा उत्पादनको केन्द्रका रुपमा विकास गर्न थालिएको छ । ‘एक गाउँ एक उत्पदान’ को परिकल्पनाअनुरुप उक्त गाउँलाई स्थानीय कृषक, निजी क्षेत्र र सरकारी..
Results 344: You are at page9of 12